Piggy Boom 3.10.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.10.0 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Piggy Boom
Piggy Boom ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
***Celebrate Spring with our limited-time offers***
*** ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန့်သတ်ထားအချိန်ပေးထားပါတယ်နှင့်အတူနွေဦးအခမ်းအနားကျင်းပ ***
piggy: "အရှင်များ ဟူ. Ladies, သင့်မိတ်ဆွေတဦးတည်းပဲသင့်ရဲ့ကျွန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကိုသင်လက်စားချေကျူးလွန်ရမယ်ပိုပြီးရွှေနှင့်ဒိုင်းဝင်ငွေဖို့ဘီးလှည့်ဖျား!" piggy Boom join ဖို့သင့်ဖေ့ဘုတ်ခ်သူငယ်ချင်းများ --Invite!
နည်းနည်းချစ်စရာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သင်၏အထူးသီးသန့်ကျွန်းများ Build, ခလုတ်ကိုတွန်းနှင့်ဘီးလည်ယနေ့အချို့သောကံအနိုင်ရ!
အသီးအသီးဂိမ်းအချို့ကံရှိခြင်းချစ်သောသူနှင့် piggy Boom ဘီးလည်နဲ့ဒင်္ဂါးပြား၏အမှိုက်ပုံအနိုင်ရရန်သင့်အားအခမဲ့နေ့စဉ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးသည်!
• Theme ကျွန်းများ
သင်သည်ထိုသူတို့သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ရန်အဘို့အ piggy Boom များတွင်အခြေတည်ကျွန်းများရာပေါင်းများစွာစောင့်ပါ။ ပိုငျသညျ, သငျသညျရပါလိမ့်မယ်ပိုကျွန်းများတည်ဆောက်
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေကို Invite နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကစားသမားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်။ သငျသညျတိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးလက်စားချေလိုသလား? အတူတူသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခေါ်ဆိုပါ။
• Miner စနစ်
သင်ကစားပွဲများတွင်လေ့လာစူးစမ်းရန်အဘို့အကြွယ်ဝသောရွှေမိုင်းစောင့်ဆိုင်းနေသည်, တစ်ဦးမိုင်းလုပ်သား Be နှင့်တူးကြဆွကြစောင့်ရှောက်! တစ်စက္ကန့်များအတွက်ဂိမ်းထဲမှာအချမ်းသာဆုံးကစားသမားဖြစ်လာသည်။
သင့်ရဲ့ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူချစ်စရာသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ထိုး Get နှင့်အတူတူသင့်ရဲ့ကျွန်းကာကွယ်ပေးသည်။ သင့်ရဲ့ချစ်စရာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းနှင့် up ပြုလုပ်မြင့်ဖို့သတိရပါ။
သငျသညျ piggy Boom ထဲတွင်ရှာတွေ့မှပို features တွေ။ ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကို join နှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်သန်းပေါင်းများစွာကစားသမားနှင့်အတူဆော့ကစား!
1. အရေးအသား / ဖတ်ရန် external storage
ကျနော်တို့ကစားသမားတွေ bug တွေဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောအခါကိစ္စများတွင်, ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ screenshots များပေးပို့ကူညီပေးဖို့ဒီခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဤသည်ကိုပြဿနာသည်အဘယ်မှာရှိနေရာချထားကြောင့်ဖြေရှင်းကူညီပေးသည်။
2. ဖတ်ရန် / SMS ပို့ / လက်ခံရရှိ
ကျနော်တို့အသုံးပြုသူများ၏အထောက်အထားတွေကိုအတည်ပြုရန်အကောင့် retrieve, အကောင့်အသစ်များ၏လုံခြုံမှုအာမခံနှင့်ကစားသမားများတစ်ချိန်တည်းမှာမိတ်ဆွေများဂိမ်းဝေမျှခွင့်ပြုပါရန်ဒီခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုပါ။
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုရှာပါ: https://www.facebook.com/PiggyBoomApp/
Piggy Boom အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Piggy Boom အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Piggy Boom အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Piggy Boom အား အခ်က္ျပပါ
3astore စတိုး084
Piggy Boom ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Piggy Boom အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.10.0
ထုတ်လုပ်သူ RAFO TECHNOLOGY INC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.rafogames.com/web/Policy.html
App Name: Piggy Boom
File Size: 95.73MB
Release date: 2019-09-09 20:59:46
လက်မှတ် SHA1: A7:DE:54:DB:C6:51:71:83:C5:6C:18:8C:97:2D:C5:BD:33:4A:D2:EE
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Aladin
အဖွဲ့အစည်း (O): "ALADIN INTERACTIVE CO.
နယ်မြေ (L): SHENZHEN
Piggy Boom APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ